प्रविधि – Etajakhabar
काठमाडौं - प्रविधिले ‘चेतना’ बाहेक मानिसको विकल्पसमेत उभ्याइसकेको छ, रोबोटका रुपमा । जसको पछिल्लो उदाहरण हुन्– ‘सोफिया’ । सन्तान उत्पादनको समेत आकांक्षा राखेकी ‘सेलिब्रेटी’ रोवोट सोफिया यतिबेला नेपालमा छिन् । जसले आज काठमाडौंमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि प्रविधिको विकास र प्रयोगमा जोड दिइन् । यसरी अविछिन्न बोलिरहने यि हुन् स्वचालित मानव अर्थात् रोबोट ‘सोफिया’ । ‘चेतना’बाहेक सबै मावनीय क्षमता छ यिनम...
एजेन्सी । ब्रेकअप भएका प्रेमी प्रेमीकाका लागी खुशीको खबर छ । टेक अ ब्रेक नाम दिइएको यो फिचरमा भर्खरै ब्रेक अप भएको छ र आफ्ना पूर्व प्रेमी वा प्रेमिकाको सम्झना दिलाउने वा ऊसँगको सम्बन्ध देखिने पोस्टहरु लुकाउन चाहनेहरुले सजिलै आफ्ना लागी सुबिधाहरु लिन सक्नेछन् । स्रोतका अनुसार कुनै समय गहिरो प्रेममा भएको जोडीको ब्रेकअपपछि हैरान भएको पाएपछि यो नयाँ फिचर थप गरेको हो बताइएको छ । टेक अ ब्रेकले तपाईल...
एजेन्सी - चीनको संघाईमा २ वर्षीय बालकले आफ्नी आमाको आईफोनमा गलत पासवर्ड हान्दा ४७ वर्षसम्का लागि लक भएको छ । अब यो आईफोन ४७ वर्षपछि मात्रै खुल्ने भएको छ। आमा घरमा नभएको बेलामा फोन लिएर बसेका बालकले लगातार फोनलाई अनलक गर्ने कोशिश गरेका थिए । त्यसका लागि उनले पटक पटक गलत पासवर्ड हाने । त्यसपछि यस्तो स्थिति बन्यो कि फोन ४७ वर्षका लागि लक भयो । फोनमा हेर्दैथिए भिडियो एक चिनियाँ सञ्चारमाध्...
नेपालमै पहिलोपटक साझाले ल्यायो सेमी लो फ्लोर बस ! यस्मा अपांगमैत्री बसको विशेषता पनि (भिडियोसहित)
काठमाडौं - साझा यातायातले बुधबारदेखि राजधानीमा सेमी लो फ्लोर बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो बस हरेक दिन राति ११ बजेसम्म सञ्चालन हुने साझाले जनाएको छ। बिरामी तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई मध्यनजर गर्दै ठूला अस्पतालहरूको रुटमा यो अपांगमैत्री बस गुड्न थालेको हो। पाटन, अल्का, प्रसूति गृह, नर्भिक, नेपाल आँखा अस्पताल, वीर, कान्ति बाल, टिचिङ, गंगालाल अस्पताललाई समेट्ने गरी बस सञ्चालनमा आएको हो। भु...
काठमाडौं - संसारकै तिव्र गतीमा कुद्ने कारको आविष्कार गरिएको छ । स्पोर्ट्स कार बनाउने स्विडिश कम्पनी कोएनिग्सएगको अगेरा आरएस हाईपरकारले विश्वकीर्तिमान बनाएको छ । यसले बुगाटी काइरोनको कीर्तिमान भंग गर्दै तिव्र गतिमा कुद्ने कार निर्माण गरेको हो । स्विडिसले बनाएको कारले ३६।४४ सेकेन्डमा ४०० किलोमिटर प्रतिघन्टाको स्पीड समात्यो र फेरि शून्य किलोमिटर प्रतिघन्टामा आयो । हाईपरकार लगभग साढे दुई किलोमिटर ...
यस्तो रहेछ २४ वर्षपछि नेपाल आएका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री चढेर आएका २१ बर्ष पुरानो पाकिस्तानी एयरफोर्सको विमान (भिडियो सहित)
काठमाडौं । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खाकन अब्बासी सोमबार अपरान्ह त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिए। सार्क सम्मेलनबाहेक २४ वर्षपछि पाकिस्तानी सरकार प्रमुख नेपाल आएका हुन्। अब्बासी पाकिस्तान एयरफोर्सको विमानमा काठमाडौं आएका हुन्। उनी काठमाडौं नफर्किंदासम्म यो जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङमा रहनेछ। कस्तो छ त उनी चढेको विमान ? पाक प्रधानमन्त्री सवार गल्फ...
विश्वलाई नै चकित पार्दै चीनले बनाउदै छ ध्वनि भन्दा पाँच गुणा तीब्र गतिको विमान !
एजेन्सी : चीनले विश्वमा चमत्कार गरिराखेको छ । चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताले ‘हाइपरसोनिक’ विमानको नयाँ खाका सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त खाका अनुसार ध्वनिको गतिभन्दा पाँच गुणाभन्दा बढी गतिको विमान बन्ने छ । बीबीसीले उल्लेख गरे अनुसार उक्त परिकल्पना अनुसार बेइजिङदेखि न्यूयोकसम्मको यात्रा केही घण्टामै पूरा गर्न सकिने छ । अहिलेका विमानमा यो दूरीको यात्रा गर्न १४ घण्टा लाग्छ । यस्तो अनुसन्धान सैन्य उपयोगित...
काठमाडौँ — गुगलले एउटा स्मार्ट क्यामेरा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त क्यामेरा स्वचालित छ । कुन बेला तपाईको तस्बिर खिच्नु पर्छ भन्ने कुरो उसलाई पहिलेदेखि थाहा हुन्छ । सुन्दा अचम्म लाग्ने यो प्रविधिको प्रयोग गुगलले आफ्नो पछिल्लो क्यामेरा ‘क्लिप’ मा गरेको हो। कृर्तिम बुद्धि (एआई) को उपयोग गरि बनाइएको यो क्यामेराको मूल्य २ सय ४९ अमेरिकी डलर तोकिएको छ। यो क्यामेराले भिडियो सुट पनि आफै गर्न सक्ने क्षमता रा...
भाइबर प्रयोग कर्ताहरुका लागी खुशीको खबर, अब एकसाथ एक अर्ब मानिससँग च्याट गर्न मिल्ने
काठमाण्डौं । यति तपाई भायबरप्रयोगकर्ता हो भने तपाईका लागी खुशीको खबर छ । म्यासेजिङ एप भाइबरबाट अब एकसाथ एक अर्ब मानिससँग च्याट गर्न मिल्ने भएको छ । भाइबर कम्युनिटी च्याट ग्रुपमा एक अर्ब जना सदस्य सीमा तोकिएको हो ।यस ग्रुपका सदस्यहरु कमेन्ट र प्रतिक्रियामार्फत अन्तरक्रिया गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । हालसम्म भाइबर कम्युनिटीमा एक अर्बभन्दा बढी जोडिएका छन् ।भाइबरले नयाँ फिचर मार्फत अरु म्...
चीनले दुई घण्टामा न्यूयोर्क पुग्ने हापरसोनिक विमान बनाएर गर्यो परिक्षण (भिडियोसहित)
एजेन्सी । चीनले दुई घण्टामा न्यूयोर्क पुग्ने विमानको सफल परिक्षण गरेको छ । ‘चाइना एकेडेमी अफ साइन्स’का अनुसन्धानकर्ताहरुको एक समूहले २ घण्टामै बेईजिङबाट न्यूयोर्क पुग्ने विमानको सफल परिक्षण गरेका हुन् । विशेष हवाई सुरुङ (विन्ड टनेल) मा गरिएको परिक्षणमा विमानले ५६ सय माइल प्रति घण्टाको गति लिएको थियो । यसबारे खोजपत्र चिनियाँ जर्नल ‘फिजिक्स, मेकानिक्स एण्ड एस्ट्रोनमी’मा प्रकाशित भएको छ । सो परियो...